IELTS ကို ထိရောက်စွာ လေ့လာနည်း (၇) သွယ် • POINT
IELTS စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ IELTS ပြင်ဆင်ရတာ ကြောက်လန့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အလုပ်လို့မထင်ရအောင် လွယ်ကူထိရောက်တဲ့ လေ့လာနည်းလေးတွေ ဖော်ပြပါ့မယ်။
IELTS ပြင်ဆင်သူတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အမှားတစ်ခုကတော့ အကြိုစစ်ဆေးတဲ့စာမေးပွဲတွေမှာ အရမ်းအာရုံစူးစိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အကြိုစစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲ များများဖြေကြားလေလေ စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ပြီးသား ဖြစ်လေလေလို့ အမှတ်မှားကြပါတယ်။
IELTSဆိုတာ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးတာပါ။ ဗဟုသုတ စစ်ဆေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အကြိုစစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြိုစာမေးပွဲတွေ ဘယ်လောက် ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာထက် သင့်ရဲ့ဘာသာစကားအရည်အချင်းသာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာစကား အရည်အချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ speaking, reading, writing, listening လေးမျိုးလုံး ကျွမ်းကျင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြိုစာမေးပွဲတွေ ဖြေရင်း မေးခွန်းနဲ့ ရင်းနှီးတာကောင်းပေမဲ့ language skill တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
၁ . ဆရာေကာင္းရွာပါ
စာအုပ်၊ သတင်းစာ၊ ရုပ်ရှင်၊ သီချင်းတွေနဲ့ဘာသာစကားတိုးတက်အောင် စိတ်ကို နှစ်မြှုုပ်လေ့လာပါ။ Conversation Club တွေ ထောင်ပါ။
English စကားပြောတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှာဖွေပေါင်းသင်းပါ။
ဘာသာစကားနဲ့ ရင်းနှီးလေလေ၊ စာမေးပွဲဖြေဖို့ စိတ်သက်သာရာရလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။
၂ . အားနည်းချက်တွေကနေ သင်ယူလေ့လာပါ
အားနည်းချက်တွေကနေ သင်ယူပြီး မိမိ အလေ့အကျင့်တွေကို သတိထားမိအောင် ပြုလုပ်ပါ။
အားနည်းချက်ကို ပြုပြင်ခြင်းဟာ အောင်မြင်နိုင်ဖို့ လမ်းစတစ်ခုပါပဲ။
သင့်ရဲ့အမှားတွေကို သိအောင်အချိန်ယူပါ။ စာလုံးပေါင်း မှားတတ်တယ်ဆိုရင် ချရေးတဲ့အကျင့် ပြုလုပ်ပါ။ Verb tense တွေ မှားရင် ပြန်လေ့လာပါ။ ဝေါဟာရပိုင်းမှာ အားနည်းလား စဉ်းစားပါ။ အမှားတွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါ။
၃ . Essay အရေးအသား တည်ဆောက်ပုံကောင်းပါစေ
အရေးအသား ကောင်းမွန်တိုးတက်လာအောင် Essayတစ်ပိုဒ်ချင်းစီ ဘယ်လိုရေးမလဲ လေ့လာသင်ယူပါ။
Essay မေးခွန်းတွေကို နားလည်အောင်ဖတ်ပါ။ မေးခွန်းတွေကို တိုက်ရိုက်ဖြေစရာ မလိုပါဘူး။ essay မေးခွန်းကွဲတွေ ဖတ်ပြီး အဖြေတူ ရေးကြည့်ပါ။
IELTS essay မေးခွန်းကွဲတွေကို ရေးဖြေကြည့်ခြင်းဖြင့် ဘယ်ခေါင်းစဉ်လာလာ ရင်းနှီးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Essay ဥပမာတွေ အလွတ်မကျက်မိစေဖို့ သတိပြုပါ။ ထိုအမှားကို ဖြေဆိုသူ အတော်များများ လုပ်ဖူးတာ တွေ့ရပါတယ်။
စာမေးပွဲမှာ သင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ မေးခွန်းပါလာခဲ့ရင်တောင် မေးခွန်းရဲ့ ဦးတည်ချက် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းရဲ့ လိုရင်းကို ထိရောက်အောင် ဖြေပေးနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလွတ်ကျက်ဖြေထားတဲ့ Essay တွေကို IELTSစစ်ဆေးသူတွေက သိနိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းအောင် ရေးနိုင်ပါစေ တစ်မှတ်မှရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတွင်း စာလုံးရေ ၂၅၀ ရေးနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်လက်ရေးဟာ သပ်ရပ်ပြီး ရှင်းလင်းပီသရပါမယ်။ လက်ရေးလက်သား ကောင်းခြင်းဟာလည်း skill တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၄ . Speaking လေ့ကျင့်ပါ
Speakingမှာလည်း အဲ့လိုပါပဲ။ သူငယ်ချင်းနဲ့ Speaking တတ်နိုင်သလောက် များများ လေ့ကျင့်ပါ။
သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြဖို့ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်ပါစေ။
Testရဲ့ ပထမပိုင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အခြေခံအချက်အလက်တွေအတွက် မှတ်စု ကြိုတင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သဘာဝကျကျ ရေးသင့်ပါတယ်။
အပိုင်း (၂) အတွက် အလွတ်ကျက်ထားတဲ့ တင်ပြမှုတွေကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
သင့်အကြောင်း၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ အထင်အမြင်တွေကို ပြောတဲ့အခါ အလွတ်မှတ်ထားတဲ့ အဖြေတွေကို စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူက သိနိုင်ပါတယ်။ စာမေးပွဲမတိုင်ခင် နေ့စဉ်မိမိကိုယ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စကားပြော လ့ကျင့်ကြည့်ပါ။
၅ . ကွဲပြားတဲ့ စာစောင်တွေဖတ်ပါ
ယေဘူယျကျကျ ခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ သတင်းစာက လတ်တလော အကြောင်းအရာ၊ သိပ္ပံ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ တိရစ္ဆာန်များအကြောင်း၊ သမိုင်းကြောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အစရှိသည်တို့ကို ရှာဖွေဖတ်ရှုပါ။
များများဖတ်လေလေ၊ ဝေါဟာရကြွယ်လေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ဖတ်ရှုခြင်းက ဗဟုသုတကြွယ်ဝစေပြီး Testထဲက စာပိုဒ်တွေနဲ့လည်း ရင်းနှီးစေပါတယ်။
IELTS ဖြေမယ်ဆိုပြီး Academic English စာပိုဒ်တွေကို မဖတ်ဖူးဘူးဆိုရင် အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။
National Geographic, the Economist, the New Internationalist နဲ့ Science Daily အစရှိတဲ့ websiteတွေ သုံးပြီး academic reader တစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားပါ။
၆ . Native တစ်ယောက်လို သွက်အောင် စကားပြောလေ့ကျင့်ပါ
Accent အမျိုးမျိုး၊ အသံထွက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်းနှီးအောင် Ted Talk နဲ့ mps player တွေ နားထောင်ပါ။
Accent အမျိုးမျိုးကို နားလည်ရုံသာမက ဝေါဟာရအသစ်တွေ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ ထိတွေ့ခွင့် ရပါလိမ့်မယ်။
General language skill နဲ့ အထွေထွေဗဟုသုတ ကျယ်ပြန့်လာလေလေ ဘာသာစကားနဲ့ test ထဲက ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးလေလေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
၇ . အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာ လေ့လာနည်းတွေကို သိရှိအောင်လုပ်ပါ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အကြိုလေ့ကျင့်တဲ့ Test တွေမှာ နည်းဗျုဟာတွေ အသုံးချပါ။
အချိန်ကို ဘယ်လိုစီမံရမလဲ။ section တစ်ခုချင်းစီကို ဘယ်လိုပြီးမြောက်အောင် ဖြေမလဲ သိရှိလာပါလိမ့်မယ်။
စာမေးပွဲတွေရဲ့ အဓိကသော့ချက်ကတော့ အချိန်စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့နဲ့ မေးခွန်းလှည့်ကွက်တွေ သိရှိဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Language skills လိုအပ်ချက် အနည်းငယ်ရှိရင်တောင် အချိန်စီမံတတ်ခြင်းက အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းအပေါ် ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Testရဲ့ တစ်ပိုင်းချင်းစီကို နားလည်အောင် အချိန်ပေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့် reading test မှာ စာပိုဒ် ဘယ်နှစ်ခု ပါလေ့ရှိလဲ၊ ဘယ်လောက်ရှည်လဲ၊ မေးခွန်း အမျိုးအစားတွေနဲ့ မေးခွန်း ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲ ဆိုတာတွေ သိထားသင့်ပါတယ်။
ဒီအရာတွေအားလုံး သိရှိခြင်းဖြင့် အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲတတ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းပုံစံ လေ့လာထားခြင်းကလည်း ဖြေတဲ့နေ့အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
E2 IELTS Youtube Channel မှလည်း IELTS ပြင်ဆင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
…IELTS စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ IELTS ပြင်ဆင်ရတာ ကြောက်လန့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အလုပ်လို့မထင်ရအောင် လွယ်ကူထိရောက်တဲ့ လေ့လာနည်းလေးတွေ ဖော်ပြပါ့မယ်။
IELTS ပြင်ဆင်သူတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အမှားတစ်ခုကတော့ အကြိုစစ်ဆေးတဲ့စာမေးပွဲတွေမှာ အရမ်းအာရုံစူးစိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။အကြိုစစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲ များများဖြေကြားလေလေ စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ပြီးသား ဖြစ်လေလေလို့ အမှတ်မှားကြပါတယ်။
IELTSဆိုတာ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးတာပါ။ ဗဟုသုတ စစ်ဆေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အကြိုစစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အကြိုစာမေးပွဲတွေ ဘယ်လောက် ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာထက် သင့်ရဲ့ဘာသာစကားအရည်အချင်းသာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာစကား အရည်အချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ speaking, reading, writing, listening လေးမျိုးလုံး ကျွမ်းကျင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အကြိုစာမေးပွဲတွေ ဖြေရင်း မေးခွန်းနဲ့ ရင်းနှီးတာကောင်းပေမဲ့ language skill တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။…
၁ . ဆရာကောင်းရှာပါ…
English စာသင်တန်းတက်ပါ။စာအုပ်၊ သတင်းစာ၊ ရုပ်ရှင်၊ သီချင်းတွေနဲ့ဘာသာစကားတိုးတက်အောင် စိတ်ကို နှစ်မြုှုပ်လေ့လာပါ။ Conversation Club တွေ ထောင်ပါ။English စကားပြောတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှာဖွေပေါင်းသင်းပါ။ဘာသာစကားနဲ့ ရင်းနှီးလေလေ၊ စာမေးပွဲဖြေဖို့ စိတ်သက်သာရာရလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။…
၂ . အားနည်းချက်တွေကနေ သင်ယူလေ့လာပါ…
အားနည်းချက်တွေကနေ သင်ယူပြီး မိမိ အလေ့အကျင့်တွေကို သတိထားမိအောင် ပြုလုပ်ပါ။အားနည်းချက်ကို ပြုပြင်ခြင်းဟာ အောင်မြင်နိုင်ဖို့ လမ်းစတစ်ခုပါပဲ။သင့်ရဲ့အမှားတွေကို သိအောင်အချိန်ယူပါ။ စာလုံးပေါင်း မှားတတ်တယ်ဆိုရင် ချရေးတဲ့အကျင့် ပြုလုပ်ပါ။ Verb tense တွေ မှားရင် ပြန်လေ့လာပါ။ ဝေါဟာရပိုင်းမှာ အားနည်းလား စဉ်းစားပါ။ အမှားတွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါ။…
၃ . Essay အရေးအသား တည်ဆောက်ပုံကောင်းပါစေ…
အရေးအသား ကောင်းမွန်တိုးတက်လာအောင် Essayတစ်ပိုဒ်ချင်းစီ ဘယ်လိုရေးမလဲ လေ့လာသင်ယူပါ။Essay မေးခွန်းတွေကို နားလည်အောင်ဖတ်ပါ။ မေးခွန်းတွေကို တိုက်ရိုက်ဖြေစရာ မလိုပါဘူး။ essay မေးခွန်းကွဲတွေ ဖတ်ပြီး အဖြေတူ ရေးကြည့်ပါ။IELTS essay မေးခွန်းကွဲတွေကို ရေးဖြေကြည့်ခြင်းဖြင့် ဘယ်ခေါင်းစဉ်လာလာ ရင်းနှီးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Essay ဥပမာတွေ အလွတ်မကျက်မိစေဖို့ သတိပြုပါ။ ထိုအမှားကို ဖြေဆိုသူ အတော်များများ လုပ်ဖူးတာ တွေ့ရပါတယ်။စာမေးပွဲမှာ သင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ မေးခွန်းပါလာခဲ့ရင်တောင် မေးခွန်းရဲ့ ဦးတည်ချက် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းရဲ့ လိုရင်းကို ထိရောက်အောင် ဖြေပေးနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလွတ်ကျက်ဖြေထားတဲ့ Essay တွေကို IELTSစစ်ဆေးသူတွေက သိနိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းအောင် ရေးနိုင်ပါစေ တစ်မှတ်မှရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတွင်း စာလုံးရေ ၂၅၀ ရေးနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်လက်ရေးဟာ သပ်ရပ်ပြီး ရှင်းလင်းပီသရပါမယ်။ လက်ရေးလက်သား ကောင်းခြင်းဟာလည်း skill တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။…
၄ . Speaking လေ့ကျင့်ပါ…
Speakingမှာလည်း အဲ့လိုပါပဲ။ သူငယ်ချင်းနဲ့ Speaking တတ်နိုင်သလောက် များများ လေ့ကျင့်ပါ။သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြဖို့ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်ပါစေ။Testရဲ့ ပထမပိုင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အခြေခံအချက်အလက်တွေအတွက် မှတ်စု ကြိုတင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သဘာဝကျကျ ရေးသင့်ပါတယ်။
အပိုင်း (၂) အတွက် အလွတ်ကျက်ထားတဲ့ တင်ပြမှုတွေကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။သင့်အကြောင်း၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ အထင်အမြင်တွေကို ပြောတဲ့အခါ အလွတ်မှတ်ထားတဲ့ အဖြေတွေကို စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူက သိနိုင်ပါတယ်။
စာမေးပွဲမတိုင်ခင် နေ့စဉ်မိမိကိုယ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စကားပြော လ့ကျင့်ကြည့်ပါ။…
၅ . ကွဲပြားတဲ့ စာစောင်တွေဖတ်ပါ…
ယေဘူယျကျကျ ခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ သတင်းစာက လတ်တလော အကြောင်းအရာ၊ သိပ္ပံ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ တိရစ္ဆာန်များအကြောင်း၊ သမိုင်းကြောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အစရှိသည်တို့ကို ရှာဖွေဖတ်ရှုပါ။များများဖတ်လေလေ၊ ဝေါဟာရကြွယ်လေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ဖတ်ရှုခြင်းက ဗဟုသုတကြွယ်ဝစေပြီး Testထဲက စာပိုဒ်တွေနဲ့လည်း ရင်းနှီးစေပါတယ်။
IELTS ဖြေမယ်ဆိုပြီး Academic English စာပိုဒ်တွေကို မဖတ်ဖူးဘူးဆိုရင် အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။National Geographic, the Economist, the New Internationalist နဲ့ Science Daily အစရှိတဲ့ websiteတွေ သုံးပြီး academic reader တစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားပါ။…
၆ . Native တစ်ယောက်လို သွက်အောင် စကားပြောလေ့ကျင့်ပါ…
Accent အမျိုးမျိုး၊ အသံထွက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်းနှီးအောင် Ted Talk နဲ့ mps player တွေ နားထောင်ပါ။Accent အမျိုးမျိုးကို နားလည်ရုံသာမက ဝေါဟာရအသစ်တွေ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ ထိတွေ့ခွင့် ရပါလိမ့်မယ်။General language skill နဲ့ အထွေထွေဗဟုသုတ ကျယ်ပြန့်လာလေလေ ဘာသာစကားနဲ့ test ထဲက ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးလေလေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။…
၇ . အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာ လေ့လာနည်းတွေကို သိရှိအောင်လုပ်ပါ…
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အကြိုလေ့ကျင့်တဲ့ Test တွေမှာ နည်းဗျုဟာတွေ အသုံးချပါ။အချိန်ကို ဘယ်လိုစီမံရမလဲ။ section တစ်ခုချင်းစီကို ဘယ်လိုပြီးမြောက်အောင် ဖြေမလဲ သိရှိလာပါလိမ့်မယ်။စာမေးပွဲတွေရဲ့ အဓိကသော့ချက်ကတော့ အချိန်စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့နဲ့ မေးခွန်းလှည့်ကွက်တွေ သိရှိဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Language skills လိုအပ်ချက် အနည်းငယ်ရှိရင်တောင် အချိန်စီမံတတ်ခြင်းက အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းအပေါ် ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။Testရဲ့ တစ်ပိုင်းချင်းစီကို နားလည်အောင် အချိန်ပေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့် reading test မှာ စာပိုဒ် ဘယ်နှစ်ခု ပါလေ့ရှိလဲ၊ ဘယ်လောက်ရှည်လဲ၊ မေးခွန်း အမျိုးအစားတွေနဲ့ မေးခွန်း ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲ ဆိုတာတွေ သိထားသင့်ပါတယ်။
ဒီအရာတွေအားလုံး သိရှိခြင်းဖြင့် အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲတတ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။မေးခွန်းပုံစံ လေ့လာထားခြင်းကလည်း ဖြေတဲ့နေ့အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။E2 IELTS Youtube Channel မှလည်း IELTS ပြင်ဆင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။..
IELTS learning Education